Iyini Ingxenye Ecacile Yokwenza Kwempahla Yokusesha Impahla Eyona Real?
Namuhla, kunanini ngaphambili abantu baqala inthanethi lapho befuna amakhaya amasha namafulethi. Kungaba usizo kubanikazi bebhizinisi ukwazi ukuthi cishe abathengi basekhaya abangaba ngu-90 babheka amawebhusayithi angayimpahla umthombo owusizo kakhulu wolwazi uma kuziwa ekuthengeni indlu noma ukuthola abaqeqeshi bezisebenzi.
Kulabo banikazi bebhizinisi abafuna amawebhusayithi abo angaphandle ukuze baphumelele futhi bathole ithrafikhi eyengeziwe, ukudala isu eliphumelelayo le-SEO kufanele. Namuhla, ngizokunikeza amacebo angcono kakhulu ekuthuthukiseni iwebhusayithi yakho ye-real estate.
Umhlahlandlela wezinyathelo ngezinyathelo zokuthola Iwebhusayithi Yakho Yezindawo Zokuthengisa Ezingxenyeni Eziphezulu Zokusesha kwe-Google
Ukuqondisa Amagama Ezingqayizivele Zendawo
Ngokwezibalo, abadayisi basekhaya abangu-70% baqala ukusesha kwabo ngegama elingukhiye lendawo, njenge-"realtor of California - slotto reviews for.". "Yize noma abasebenza kakhulu bekhonza izindawo eziningi, uma uqala iwebhusayithi yakho, kungcono ukugxila emzini oyinhloko owenza ibhizinisi ekuqaleni. Abaningi be-SEO ochwepheshe basikisela ukuthuthukisa isayithi lakho ngemigomo yokucinga yendawo yangempela negama lomuzi kubo.
Esinye isici esibalulekile ukwenza iwebhusayithi yakho ibe yimithombo. Isibonelo, ekhasini elinjengokuthi "Ukuhlala eCalifornia," inikezela ngolwazi ezigumbini zesenkulisa nezesikole, imali engenayo emaphakathi, amanani obugebengu, izibalo eziwusizo kumnikazi wendawo yokuhlala, njll.Khumbula, okuqukethwe kwakho kuwebhusayithi kufanele kube kokubili okufundisayo nokufanelekile. Isebenza ngale ndlela elandelayo: i-website yakho ye-real estate ehloswe kakhulu, amathuba okungcono kakhulu okusezingeni eliphezulu kuma-SERP.
Gcwalisa Amakhasi akho eWebhu ngokuqukethwe okuthakazelisayo nokuyigugu
Indlela engcono kakhulu yokuhambisa ithrafikhi ephilayo kuwebhusayithi yakho ukuvuselela amakhasi akho wewebhu ngokuqukethwe okuthakazelisayo njalo. Ochwepheshe be-SEO bancoma ukuthi ubhale okuthunyelwe kwebhulogi ezindaweni ozithandayo ngokuzithengisa ngazo. Ngamunye walawo mabhulogi ebhulogi kufanele athole ikheli lendawo ethile, okungenzeka abathengi basekhaya bazobe befuna ukusebenzisa i-Google.
Ngenxa yokuthi ikheli liba igama elingukhiye, cabanga ukusebenzisa kulo meta incazelo, isihloko sombhalo, amathegi we-alt futhi ngokuqinisekile okuqukethwe.
Uma udala futhi ushicilela imibhalo yakho qiniseka ukuthi ngamunye uhlanganisa okungenani amagama angu-200. Woza ngokuqukethwe okuyingqayizivele okuchaza kabanzi izici zendawo yakho.
Yenza izithombe ze-Quality namavidiyo
Sebenzisa izithombe namavidiyo. Izithombe eziphezulu zezinto ozithengisayo ziyingxenye ebalulekile yokusebenza kwe-injini yokusesha ye-real estate. Khumbula, yizinto eziyinhloko zokuzibandakanya kumasayithi e-real estate. Abathengi basekhaya bathanda ukubona ukuvakasha kwevidiyo okuthakazelisayo ngaphakathi kwezindlu zabo nezindlu zabo ezintsha. Ukubamba ubufakazi kumavidiyo kungenye indlela enkulu yokuheha izivakashi eziningi kuwebhusayithi yakho.
Lungiselela isayithi lakho lamadivayisi weselula
Lezi zinsuku, abantu abaningi baningi ukusesha ukusesha kweselula kwosesho yedeskithophu. Izibalo zibonisa ukuthi cishe abangaba ngu-90% abathengisi basekhaya banamuhla bafuna ukusebenzisa idivayisi yeselula ngesikhathi senqubo yokuthenga impahla. Ngalezi zinombolo engqondweni, kusobala ukuthi ukwenza isayithi yakho yeselula kuyinto ebalulekile ekuthuthukiseni injini yokusesha yezindlu. Umklamo wewebhu ophendulayo kukusiza ukuba ume ngaphambi komncintiswano ukwandisa ukubonakala kwawo kumajini. Ngaphezu kwalokho, ukuklama okuphendulayo kusiza ukugcina izindleko ekulawuleni okuqukethwe kwewebhusayithi.
Ngethemba ukuthi ujabulele lawa macebiso awusizo wokuthi ungathuthukisa kanjani ukuthuthukiswa kwe-intanethi ye-website yakho ye-real estate. Uma unemibuzo, ungabi namahloni okuxhumana neqembu lethu le-Semalt. Singathanda ukuzwa kusuka kuwe!